Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Kalfadhigii Kooxda TPLF Oo Fashali Ku Dhamaaday .
Daawo: Kalfadhigii Kooxda TPLF Oo Fashali Ku Dhamaaday .
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Maqale ee xarunta Gobolka Tigrey ayaa sheegaya in caawa la soo gabagabeeyay kalfadhigii Kooxda TPLF oo baryahan uga socday magalada Maqale ee gobolka Tigre.
Xog hoose oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia (ONA) ayaa muujinaysa in laga guulaystay kooxdii uu Abay Woldu hogaaminayay oo ay guulaysteen kooxdii u hogaaminayay Gabretsayon Wolde Micheal. Kalfadhigan oo socday mudo dheer ayaa la sheegayaa in caawa la soo gabagabeeyay.
War murtiyeed ka soo baxay kooxdan wakhtigeedii dhamaaday ee TPLF ayay ku sheegeen in ay doorteen 9 xunood oo noqon doona gudiga fulinta ee ururka TPLF. Waxaa Gudoomiye loo doortay Gabretsayon Wolde Micheal kuxigeena waxaa noqotay haweenay lagu magacaabo Fitlewarq Gabre Izgahaber.
Waxaa mar kale cirka isku shareeray khilaafkii kooxda TPLF, kadib markii xilalkoodii laga eryay qaar kamid ah saraakiisha kooxda TPLF oo ay kamid yihiin madaxwayne kusheegii Gobolka Tigrey ahaana gudoomiyihii ururka TPLF Abay Woldu iyo haweenaydii Malis Zinawi, Asaf Masfin.
Xogtan oo aan wali lacadaynin ayaa muujinaysa in qaar kamid ah xubnaha Golaha Dhexe ee TPLF ay kabiyo diideen xilka qaadisda saraakiishan xilalkoodii laga xayuubiyay, iyo waliba sida loo bahdilay oo ay ku sheegeen si anshaxa kabaxsan.
Khilaafkan ayaa lagu sheegay kii ugu waynaa ee abid soo kala dhex gala kooxda TPLF, waxaana lasheegayaa in khilaafkii waynaa ee 2003 kooxda soo kala dhex galay uu midka hada jira aad uga wayn yahay, waxaana lasaadaalinayaa in uu kii ay kukala tagi lahaayeen yahay.